Galaxy S21 FE dị n'ụzọ, mana ọ ga-ewe oge iji rute n'ahịa | Gam akporosis
Galaxy S21 FE dị na ụzọ, mana ọ ga-ewe oge iji rute ahịa
The Galaxy S20 FE bụ otu n'ime njedebe kachasị nke ụlọ ọrụ Korea, ọnụ ọnụ maka ndị mmadụ niile maka ọnụahịa ya. na njiri mara dị eluAnyị nwere ike ikwu na ọ bụ Apple si 2nd ọgbọ iPhone SE, ma na a imewe na-edebe oge.
Site na Samsung, anyị maara etu ọnụ a siri nwee ahịa, ha na-echigharịkwuru ya n'ihe gbasara mmelite, n'ezie ọ dịla Samsung ama mbụ Samsung natara One UI 3.1, ọbụna tupu Galaxy S21, Rịba ama 20 ma ọ bụ Galaxy S20. N’ụzọ na-atụghị anya ya, ọgbọ nke abụọ abụrụlarị ụzọ.
Dabere na ụmụ okorobịa si SamMobile, Samsung naa na-arụ ọrụ na ihe ga-abụ ọgbọ nke abụọ, Galaxy S21 FE, ọnụ ya na akara ngosi SM-G990B. Ọnụ ọhụrụ a ga-enweta ụfọdụ n'ime ozi ọma ahụ ruru Samsung S21 dị ọhụrụ ma nwee naanị na ụdị 5G.
Newdị ọhụrụ a dị na 128 na 256 GB nchekwa ụdị ga - akụ ahịa na gam akporo 11, yabụ ọ ga - akụ ahịa ahụ tupu mwepụta nke gam akporo 12, ikekwe maka ọnwa nke July-August ma ga - eme ya na agba ntụ, pink, purple and white.
Ọhụrụ ọhụrụ ọnụ Galaxy S21 bụ nhọrọ magburu onwe ya taa, ọkachasị ugbu a emeela ka ọnụ ahịa mmeghe ha dị ka ọgbọ gara aga. Galaxy S20 FE ka bụ nhọrọ dị oke mma, ọkachasị na ọ ga-enweta mmelite afọ atọ, yabụ a ga-emelite ya na gam akporo 12 na gam akporo 13.
Na Amazon, anyị nwere ike ịchọta na Galaxy S20 FE site ihe karịrị 500 euro na nsụgharị 4G na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 600 euro maka ụdị 5G, ọnụahịa dị egwu maka ihe ọ bụla ọ na-enye anyị. Mwepụta ego nke Galaxy S21 FE ga-agbaso gburugburu euro 700-800 na ihe gbasara ịrụ ọrụ na ọgbọ gara aga, obere ma ọ bụ ihe ọ bụla agaghị enwe anyaụfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy S21 FE dị na ụzọ, mana ọ ga-ewe oge iji rute ahịa